Shir ay ku kulmeen Hay’adaha ka howlgala Irdaha Dalka laga soo galo lagana baxo ( Bar-xuduudeedyada). – Walaal24 Newss
Wasiiru dowlaha wasaaradda Amniga gudaha Xildhibaan Maxamuud Maxamed Buunow ayaa furay Shirka xoojinta wadashaqeynta Hay’adaha ka howlgala Irdaha Dalka laga soo galo lagana baxo ( Bar-xuduudeedyada).
Shirkaan oo ay soo qabanqaabisay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa waxaa kasoo qeybgalay Wasaaradda Maaliyadda, Wasaaradda Gaadiidka iyo duulista Rayidka, Wasaaradda Dekadaha, Wasaaradda Caafimaadka, Boliiska Garoonka Aadan Cadde, Maamulka Garoonka Aden Cadde, Hay’adda Sirdoonka Qaranka, Ururka Midowga Duulimaadyada iyo Dalxiiska Soomaaliyeed iyo Gudigga shirkadaha diyaaradaha.
Agaasimaha Guud ee HSJ Col. Maxamed Aadan Kofi ayaa ku sheegay muhiimadda Shirkaan in ay tahay in la abuuro iskaashi iyo masuuliyad wadaag dhab ah oo laga yeesho howlaha ka hortagga Dambiyada Abaabulan ee isaga gudba xuduudaha.
Waa Shirkii 3aad oo noociisa ah oo ay Soo qabanqaabisay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya oo looga arinsanayay xoojinta wadashaqeynta Hay’adaha ka howlgala Irdaha Dalka (Bar-xuduudeedyada).
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya oo sheegay in tartan furan loo qabandoono kooxaha Fanka ee heerka Qaran
Madaxweyne Farmaajo oo Addis-Ababa uga qeyb galaya shir looga hadlayo xaaladda amni xumo ee Koonfurta Suudan